Daawo Sawirada:-Darajooyin iyo Shahaado Sharaf la gudoonsiiyay Saraakiil katirsan Ciidanka Ahlu Sunna -News and information about Somalia
Home Warkii Daawo Sawirada:-Darajooyin iyo Shahaado Sharaf la gudoonsiiyay Saraakiil katirsan Ciidanka Ahlu Sunna
Daawo Sawirada:-Darajooyin iyo Shahaado Sharaf la gudoonsiiyay Saraakiil katirsan Ciidanka Ahlu Sunna
Madaxa xukuumada Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa maanta ka qeyb galay munaasabad lagu abaal marinayay Saraakiil katirsam ciidanka Ahlu Sunna oo fashiliyay qarax lala damacsanaa munaasabad ka dhaceysay magaalada Guriceel.
Saraakiishan qaarkood ayaa lagu abaal mariyay darajooyin ciidan halka kuwa kalana la siiyay abaal marino ay biskoolado ku jireen, waxaana saraakiishan la sheegay in ay fashiliyeen qarax ismiidaamin ah.
Madaxa xukuumada Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir ayaa sheegay in saraakiishaan ay mudan yihiin bilad geesinimo iyo abaal marino qaali ah, waxa uuna xusay in ay dhiigooda u hureen bad baadinta madaxdooda iyo shacabka .
Saraakiisha darajooyinka iyo abaal marinta la siiyay ayaa waxaa isugu jireen saraakiil katirsan ciidanka Nabad sugida Ahlu Sunna iyo sidoo kale ciidamo kamid ahaa ilaalada Sheekh Maxamed Shaakir.
Ciidamo katirsan kooxda Ahlu Sunna ayaa 23-dii bishii May ee Sanadkan fashiliyay nin la sheegay in uu doonayay in uu isku qarxiyo munaasabad ka socotay Guriceel oo ay goob joog ka ahaayeen Sheekh Shaakir iyo masuuliyiin kale oo katirsan Kooxda Ahlu Sunna.
Previous articleXildhibaan ka hadlay Sababta ay maanta u tageen magaalada Kismaayo
Next articleDhakhaatiirtii Cubanka ahayd oo la ogaaday in lagu hayo Gobolka Gedo
Xasan Daahir oo kashifay xaaladiisa dhabta ah ee Xabsi Guriga &...